ဆက်သွယ်ရန် - Get အခမဲ့သင်တန်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလောက်• Yuri BSF BSF
ဆက်သွယ်ရန် - အခမဲ့သင်တန်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလောက် BSF Get
အနံ့မရှိဘဲကမ္ဘာ့ငါးမွေးမြူရေးလောက်အတွက်ပထမဦးစွာ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
App ကို Download လုပ်ပါ
Yuri BSF ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်တော်တို့ကို Yuri BSF ကိုဆက်သွယ်ပါ - အနံ့မရှိဘဲလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးစတင်ရန်စေချင်သလား? သို့မဟုတ်နိုင်ကြသည်ပေမယ့်ရလဒ်တွေကိုသေးအကျယ်ချဲ့မရဖြစ်ကြပြီးသေးသနံ? Yuri BSF သင်ကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်, သင်ကူညီပါရန်ရှိပါသည်အောက်တွင်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများမှတဆင့် Yuri BSF Yuri BSF ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
Yuri BSF ဆက်သွယ်ပြီးလျ / WA 0812-2105-2808 မှာတိုက်ရိုက်မစ္စ Yuri ရန်သင့်မေးခွန်းများကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected] သင်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရေးသားကျနော်တို့ထဲကထူးလေ၏လိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုရှိပါသလော ကျွန်တော်တို့ကိုအကြှနျုပျတို့အားဖုန်းခေါ်ခြင်းနှင့်ဟောပြောပွဲပေးလည်း ahlinya.Anda မှစကားပြောသင်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဖြေနှင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအားငါပေးမည်ဆိုပါကဖုန်းဆက်ဖို့အချိန်အချိန်စာရင်းနိုင်ပါတယ်။
စိုက်ပျိုးမှုနည်းစနစ်လောက်ထဲကအများစုဟာတစ်ဦးလမ်းပြ Yuri BSF မှတဆင့် site ပေါ်တွင်အခမဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်အတူလိုက်ပါသွား။ bsf စိုက်ပျိုးလေ့ကျင့်ရေးငါတို့သည်အခမဲ့ပေး, ကြှနျုပျတို့အောင်မြင်သောလမ်းညွှန်မှအာမခံပါသည်။ အိမ်မှာအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်သင့်လယ်ယာအလေ့အထများနေချိန်မှာသင်ရုံသင်လိုအပ်အထုပ်ကိုဝယ်ကြလော့။
Yuri လယ်ယာ site ကိုရွေးချယ်ရေး BSF 99
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလောက်ကနဦးစကေး, အသေးစား, အလတ်စားနှင့်အကြီးစား
အပတ်စဉ် Update ကိုလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး။
salam SAVE နှင့် BERSIHLAH Indonesiaku
ဘယ်အချိန်မဆိုကလစ် နှိပ်. မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။
Related ရှာရန်: ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, အဆက်အသွယ် Yuri bsf, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
Yuri BSF 10 အောင်မြင်မှုအစီအစဉ်
99 တည်နေရာ Ranch လောက် BSF
Buy လောက်လောက် BSF နှင့်စျေးကွက် Method ကိုရောင်း
Probiotics နှင့်အတူမွေးမြူရေးထုတ်လုပ်မှု Lele တိုးတက်စေူခင်း
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငါးခူ Feed ခေတ် 5-7 နေ့ Create
စားနပ်ရိက္ခာ / နောက်ဆုံးသတင်းများ Lele 2019 Feed Make လုပ်နည်း
ငါးခူ Feed ရန်ကင်းလွတ် BSF နှင့်စားအုန်းဆီချေး
ချေးနဲ့ EM4 အတူချေးစော်ဖောက်ခြင်းအုန်း Tofu
လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး နံတော်မမူကြောင်းလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး ဖလောင်းကောင် အာဖရိကငါးခူ အနက်ရောင်စစ်သား၏စိုက်ပျိုးမှုလောက်ပျံသန်း လမ်းလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး bsf အနံ့မရှိဘဲလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေမီဒီယာများ ဖွဲနုနှင့်အတူလယ်ယာလောက် em4 နှင့်အတူလယ်ယာလောက်
Yuri BSF - အနံ့မရှိဘဲကမ္ဘာ့ငါးမွေးမြူရေးလောက်အတွက်ပထမဦးစွာ
အထောကျအကူ Links များ
ဆိုက်ကိုမြေပုံ - ဝဘ်ဆိုက်မြေပုံ Yuri BSF
© 2000-2018 FreshBooks | ခွန်ကောက်အခမဲ့ Call: 0812 - 2105 - 2808
Google + က https: //plus.google.com/+YurieBSF